Ny paikady ahazoana mpanjifa tsara indrindra an-tserasera | Martech Zone
Ny paikady ahazoana mpanjifa tsara indrindra an-tserasera
Talata, Desambra 29, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Na tianao izany na tsia, ny raharaham-barotra rehetra dia manana varavarana mihodinkodina isaky ny mandeha sy miverina ny mpanjifa. Isika rehetra dia afaka manao zavatra izay mampiakatra ny fihazonana ary manamaivana ny vidiny sy ny ezaka fanampiny mifandraika amin'ny fitadiavana mpanjifa vaovao, fa ny mpanjifa taloha kosa dia mbola hiala noho ny antony ivelan'ny fifehezana antsika.
ELIV8 dia namorona endrika hafa miavaka infographic miaraka amin'ny paikady fahazoana 7 miavaka hiantohana ny paikadin'ny varotra an-tserasera miasa amin'ny fahombiazan'ny tampony.
Organic Search mbola zava-dehibe. Ny fampiasana paikady atiny mahomby sy ny fanatsarana ny sehatrao sy ny atiny dia mety hitarika fifamoivoizana vaovao. Raha ny marina, 80% ny olona tsy miraharaha dokambarotra karama fa mifantoka amin'ny valin'ny organika ary 75% ny olona tsy mba mandalo ny pejy voalohany amin'ny valin'ny karoka.
Manisy sary sokitra fahefana - Mamorona sy mampiroborobo ny atiny izay mahazo rohy miverina amin'ny tranokalan'ny manampahefana, ny atiny sy ny tranonkalanao dia hahazo ny laharan'ny motera fikarohana ambony kokoa ary hahazo mpitsidika amin'ny tranokala mifandraika mifandraika aminao. Ny fampiroboroboana ny fahefana dia afaka mampitombo ny fikarohana biolojika hatramin'ny 250% mankany amin'ny pejy tadiavinao.
Influencer Marketing - Ampidiro ireo influencer izay efa manana ny mpihaino tadiavinao, avy eo araraoty hananganana ny anao ny mpihaino, azonao atao ny mahazo mpanjifa vaovao amin'ny hafainganam-pandehan'ny varatra. Amin'ny salan'isa, ny marketing influencer dia mahita famerenam-bola 6-to-1 amin'ny fampiasam-bola.
Fanondroana amin'ny lafiny 2 - Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, 65% amin'ny orinasa vaovao dia avy amin'ny referral an'ny mpanjifa. Ny referansy 2-lafiny dia samy ahazo valisoa ny referreran'ny naman'izy ireo noho ny fandraisany anjara. 4X ny olona no be vidy kokoa raha tendren'ny namana iray.
Votoatiny mifantoka amin'ny varotra - 61% ny olona milaza fa mora kokoa ny mividy amin'ny marika iray izay manome atiny. Rehefa mamorona infographics, whitepapers ary horonan-tsary mitondra ny mpitsidika ny antso-to-hetsika ianao dia hampitombo ny varotrao.
mailaka Marketing - Ny $ 1 lany amin'ny mailaka dia manana tambiny $ 44 eo ho eo amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mailaka kendrena hanamafisana ny valin'ny fahazoana anao. Ny automatisation marketing dia afaka mampitombo vola 10% ao anatin'ny 6-9 volana fotsiny
Analytics - 50% amin'ireo orinasa no mahita fa sarotra ny manondro ny marketing mivantana amin'ny valin'ny fidiram-bola. Ampahafantaro ny fantsonao miova fo ambony mampiasa Analytics. Ny orinasa tsy ampy dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fandrefesana ny ROI marketing.
Tags: Fanondroana ila-2fahazoanaAnalyticssary sokitra fahefanafahazoana mpanjifamailaka Marketingmarketing marketingfikarohana biolojikaanaranaatiny mifantoka amin'ny varotraSEO
Starbucks, azonao atao tsara ny manao fiarahamonina
Dec 30, 2015 amin'ny 6: 10 AM
Nanazava tsara ny paikady ara-barotra 7 tsara indrindra ho an'ny fahazoana mpanjifa haingana, azo antoka fa hanampy ny orinasako hitombo tsara izany. Misaotra amin'ny fizarana.